A Chinese Odyssey: Part Three - YTV
Home » Programs » International Movie » A Chinese Odyssey: Part Three
Daily Show, International Movie, Programs September 5, 2020 12:10 am
? ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့အချစ်တော်စွန်းဝူခုန်း ဖြစ်မလာခင်မှာ ဘယ်လိုရာဇဝင်တွေရှိလဲဆိုတာ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးထားတဲ့ ဟာသဒရာမာဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်နော်….
? ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ Fairy Zixia ဆိုသူဟာ နောင်မျိုးဆက်မှာ Monkey King ဖြစ်လာခဲ့ပြီး အများသိကြတဲ့ စွန်းဝူခုန်းလို့ ဖြစ်လာမယ့်သူတစ်ဦးပေါ့…. ဒါပေမယ့် ဒီလိုဖြစ်လာမှာစိုးတာကြောင့် အမျိုးမျိုးတင်းကျပ်မှုတွေနဲ့ ဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်…. ရာဇဝင်သမိုင်းအရ ရှုပ်ထွေးမှုတွေကြားကနေ ဘယ်လိုမျိုးအခက်အခဲတွေနဲ့ ဖြစ်လာခဲ့မလဲ….? ဘယ်လိုမျိုးအရှုပ်အထွေးတွေက ဘယ်လောက်ထိကို ပါဝင်ပတ်သက်နေခဲ့လေမလဲ….?
❓ ဒီလို ရာဇဝင်တွေထဲကနေ စွန်းဝူခုန်းဆိုတာ ဘယ်လိုများဖြစ်လာခဲ့မလဲ…? ဆိုတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YTV Channel ကနေ ဒီဟာသရာဇဝင်ဇာတ်ကားလေးကို ထုတ်လွှင့်ပြသပေးတဲ့အခါ ဆက်ဆက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေနော်…